Era of Celestials 1.342.179150 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.342.179150 လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Era of Celestials
Era of Celestials ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ရန်သူကစစ်တပ်ကနောက်ဆုံးခံတပ်တံခါးအားလုံးကိုလမ်းကိုချီတက်ကြပါပြီ။ အဆိုပါကောငျးကငျသူတို့ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးချန်ပီယံမျှော်ကြည့်။ ခေါ်ဆိုမှုအဖြေနှင့် Vanquisher ၏ Path ကိုအပေါ်စတင်! ဘုန်းအသရေဘို့အ Fight!
ချောမွေ့ထိန်းချုပ်မှု, Smart ထိုးနှက်တုံ့ပြန်ချက်, လက်တွေ့အသံများနှင့်ကြက်သရေကိုအထူးကာတွန်းသက်ရောက်မှုများနှင့်တစ်ဦးအဆုံးစွန်ဂိမ်းအတှေ့အကွုံကိုရောက်စေဖို့ပေါင်းစည်းအသေးစိတ် 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံရိပ်ယောင်များ။
[ထူးခြားသော Elysian ေူပာင်းလဲရေးကိုစနစ်]
ထူးခြားတဲ့ Elysian ေူပာင်းလဲရေးကိုစနစ်, ရဲရင့်သူရဲကောင်းများဘယျသူမှမအောငျ Elysians အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်သတ်ဖြတ်ရန်သူများကိုနှိမ့်ချ mow နိုင်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်များနှင့်အတူ Elysians Elysians ၏တနျခိုးအသုံးချနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပြဿနာများရင်ဆိုင်ရဖို့အမြော်အမြင်ရှိရှိသုံး, သင့်ခရီးအတွက်ကိုဖှငျ့ပေးရခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်!
ကောငျးကငျ၏ခေတ်၌, sprite များနမူနာသင့်ရဲ့သစ္စာအရှိဆုံးကာကွယ်ဖြစ်ကြသည်။ စစ်တိုက်ရာအပူများတွင်သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်သင်၏အအနားမှာလက်ျာဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်! ကွဲပြားခြားနားသော sprite များနမူနာအကူအညီများ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများများကိုပေးစွမ်းသင်မည်သည့်အခွအေနေကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်မဟာဗျူဟာ၏စည်းစိမ်ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်, အလိုတော်မှာ၎င်းတို့အကြားအကူးအပြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကောငျးကငျ၏ခေတ်ကြောက်မက်ဘွယ်အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူပြည့်စုံအံ့မခန်းဝတ်စုံတစ်မိန်းမောတွေဝေခင်းကျင်း, ပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်ယခုတောင်မှစစ်မြေပြင်ပေါ်တွင်သင်၏အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုဖို့မမျှဆင်ခြေရှိပါတယ်။
[Real-Time PvP စစျပှဲမြား]
ထိပ်တိုက်တွေ့၏ 1v1 Real-time တိုက်ခိုက်ရေးကနေဒီလောက်မျှော်လင့်ချက်ပြိုင်ပွဲနှင့်ချော်ရည်တောင်တက်၏ multiplayer ရန်ပွဲရန်, ကောငျးကငျ၏ခေတ်အရေးယူ-ထုပ်ပိုးတိုက်ခိုက်ရေးနှင့်ဗစ်တာများအတွက်ရက်ရက်ရောရောဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသည်။
အဆိုပါ Vanquisher ၏ Path ကိုအံ့သြဖွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အမဲလိုက်အကြီးအကဲတွေနှင့်အတူခင်းဖြစ်ပါတယ်ကိရိယာများရတဲ့နှင့်ကောငျးကငျ၏ခေတ်ပစ္စည်းများသောင်မတင်၏အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ချောမောဆုလာဘ်ဝင်ငွေနှင့်သင့် BR မြင့်တက်ပေးပို့ဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုအကြီးအကဲတွေ, ဥပမာအားဖြင့်အကြီးအကဲတွေ, အချိန်ကန့်သတ်ပမာဏတက်သည်ကိုပြသသောဒုစရိုကျနဂါးဒါမှမဟုတ်တခြားအကြီးအကဲတွေမဆိုသတ်ပစ်။
Era of Celestials အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Era of Celestials အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Era of Celestials အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
catappult စတိုး 27.65k 17.47M
Era of Celestials ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Era of Celestials အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.342.179150
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.gtarcade.com/en/terms.html
Release date: 2019-06-17 02:38:22
လက်မှတ် SHA1: F5:6F:12:E9:10:39:05:1C:3E:CA:9D:FF:C5:39:8C:63:FD:8A:88:55
ထုတ်လုပ်သူ (CN): zhaobaizi
အဖွဲ့အစည်း (O): youzu
နိုင်ငံ (C): 0000
Era of Celestials APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ